Bodybuilder Ezivelele Oliva Serdzhio: Biography, impumelelo
Oliva Serdzhio - legend olungenakuqhathaniswa phakathi bodybuilders. Yiqiniso, leli gama eyaziwa ngokuthi kahle umphakathi, njengoba igama Arnolda Shvartseneggera, kodwa inganekwane, futhi kwaba ngaphansi kwalesi moniker ukwazi hero indaba bethu bamahhotela walo mdlalo, namanje njengelinye lamazwe bodybuilders engcono.
Oliva Serdzhio wazalwa enhlokodolobha yase -Cuba, e-Havana, July 4, 1941, indodana ngalendoda umoba, futhi engu-12, waqala ukusiza uyise endaweni okutshalwa kuyo izihlahla e Guanabakao. Kwakuwumsebenzi onzima, okuyinto cishe, futhi anikeza ugqozi ukuthuthukiswa kwemisipha umsubathi. Ubaba Sergio empilweni kudlala indima enkulu, ngoba iseluleko sakhe umsubathi abaneminyaka 16 ijoyina ibutho Batista. esemncane akubi okuthiya fighter nge ubukhomanisi, ngoba uyise Olive sika waqinisekisa isikhulu ukuthi ikusasa usevele i bodybuilder omdala, futhi isitifiketi sokuzalwa kulahleka. Ngemva kokunqoba ka Fidel Castro, athlete eshiya ibutho.
Okwesikhathi esithile esizayo sawo esiningi legend akasebenzelani ngento eziqondile. Uhlala isikhathi sakhe esiningi ogwini, lapho ahlangana khona nomngane ngubani wammemela weightlifting club. Phakathi nezinyanga eziyisithupha ukuqeqeshwa Sergio ephumelelisa Imiphumela umxhwele bese engena National League abasubathi.
Escape kusukela Liberty Island
Ngo-1962, Oliva Serdzhio uthola endaweni yesibili yodumo eNational Championship weightlifters-Cuban, ukulahlekelwa esincane umholi amaphuzu - Alberto Rey Geyms Hernandez. Kodwa ngemva winner elimele, Sergio uthunyelwa ukumela izwe lakhe ngo-imincintiswano in Jamaica. Athlete ngesikhathi imidlalo cranked Iqhinga ngokuphelele ezingalindelekile: ukulinda lapho unogada ahlangahlangene, wayohlala abasha uyabaleka futhi uya ngqo isikhundla US, lapho ufuna ukukhoseliswa. Eqinisweni ezithakazelisayo: emva kwesikhashana iqhinga elifanayo provernuli omunye abasubathi 65-Cuban, kuhlanganise weightlifters futhi lonke iqembu kanye abaqaphi.
Umuzi wokuqala American, ukuhlangabezana nombaleki kwaba Miami, Florida, lapho esezinzile ngemva kokuthola yisakhamuzi Oliva. Sergio waqala uthole ophilayo TV silungisa. Ngo-1963, iqhawe esizayo kuhanjiswe ku Chicago, Illinois, lapho ethola umsebenzi esitolo steelmaking. Naphezu kwesikhathi amahora 10-12, wayohlala akagcini nokuqeqeshwa kwakhe ukwenza enye amahora 2-3 ehholo lendawo. isimiso esinjalo matasa lithela izithelo, futhi ngokushesha Oliva ubona wayohlala wendawo owaziwa Bob Gadjah eyenza umfundi wakhe USergio.
Impumelelo lokuqala kwaba ukunqoba lo msubathi phezu mncintiswano junior amateur, "Mnu Young Chikagolend" ngo-1963. Sergio waphawula phakathi abadlali professional, futhi igama lakhe zaqala ukusetshenziswa belingana amagama anjalo bodybuilders owaziwa njengo Larry Scott, Bill Pearl futhi Chak Sayps.
Ngo-1966, Oliva ingena International Federation of Ukwakha umzimba futhi ngek isihloko "Mnu Umhlaba". 1967 I-Sergio kuyoba engengaphansi yimpumelelo, ngoba kulapho athlete uthola isihloko "Mnu Yonke Endaweni Yonke". Kuzothatha ngempela isikhathi esifushane, futhi Sergio uyosibonisa isihloko "Mnu Olympia ', okuyinto umvuzo lesikhatsiseLulwimi bodybuilder. Phakathi nenkonzo yakhe yokuba professional, uye waba umnikazi waleyo isihloko kathathu ngaphezulu.
Ukunqoba kuka-1968 isibe ikakhulukazi ezibalula Sergio Oliva. Bodybuilder isikolo olungenakuqhathaniswa ngisho namuhla, futhi ezisohlwini Guinness Book of Records. Ngo-1969, lo msubathi nekazuzelwa Arnold abasha futhi ohahela isikhundla Schwarzenegger, yena owayesevele waba isihloko emine nesikhathi "Mnu Yonke Endaweni Yonke".
Ngonyaka olandelayo, ngo-1970, umbusi wesikhathi esizayo California ngumuntu udevu e izibuko namanje kuthatha isihloko "Mnu Olympia 'at USergio. Izoziphindiselela Oliva ngo-1971 akuzange kwenzeke, njengoba ngenxa iqhaza ukuncintisana sawo esiningi Emncintiswaneni inhlangano yamazwe ngamazwe uye eziphoqelelwe kuvinjelwe ukusebenza lo msubathi. Nakuba unyaka ngaphambili ukuba Arnold Schwarzenegger owenze iphutha elifanayo alikakakhokhiswa nge kuzisho. Ngo-1972, ukunqoba futhi waya inkanyezi movie, kodwa namanje uthi, ukuthi kwaba olungcolileyo, ngoba yokwakheka amajaji washintsha ngomzuzu wokugcina.
Ngo-1973, ngemva ukuhoxiswa Sergio Oliva kwesokunxele enkundleni ka bodybuilders professional, isola abahleli nokuchema mncintiswano. Iminyaka eyishumi nambili umsubathi esebenza njengesazi amaphoyisa e-Chicago, kanye bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe coaching iqhaza emncintiswaneni sawo esiningi, ihlelwe WBBG futhi WABBA.
Ngo-1984, umsubathi oneminyaka engu-43 ubudala uye wabuyela endaweni yesikhulumi lochwepheshe. Sergio senzeka yesishiyagalombili kuphela, ngoba wamelana nabaphikisi abasebasha nabanokuhlangenwe nakho okwengeziwe, nakuba izethameli wabingelela ethukuthele isinqumo wabahluleli. Inkulumo kosuku eziningi khumbula: Sergio lidlule phezu yesikhulumi lwesonto-4 indodana yakhe, wathi: "Akukho umehluko kulokho endaweni ngathola. Phela, ngisho engu-12 kamuva bengiyakuba ngawe inganekwane efanayo. Futhi ubani owazi, mhlawumbe ezandleni Inganekwane yami esizayo. " Ngemva kwalokho, izilaleli beqhumuka esinokuduma ihlombe futhi ovations. Ngo-1985, Sergio futhi waphuma kwi catwalk professional, kodwa kutholwe indawo lesishiyagalombili. Ekugcineni yena saphela umsebenzi umdlali.
Sergio Oliva. ukuqeqeshwa
Uyini lo mkhuba athlete? Futhi wakwazi ukufeza imiphumela enjalo? Yiqiniso, izakhi zofuzo kanye izici isakhiwo umzimba nengxenye, kodwa ihlanganisa nokuqeqeshwa Serdzhio uDali yalokho omkhulu. Into wukuthi sawo esiningi wawuvinjelwe ekhaya umsubathi. Ngemva kokubaleka Sergio Angiyena eyaziwa kahle kakhulu ngesiNgisi kanye umzimba ngokuphindaphindiwe, ubukele nabanye abasubathi ejimini. Bengazi, Oliva ufake isicelo isimiso isethi multi Dzho Uaydera, okuyinto yangempela ukwanda ukuqeqeshwa ivolumu.
Sergio wasebenza amahora ambalwa ngosuku, ne ukuqeqesha bonke imisipha ngesikhathi esifanayo. Isimanga siwukuthi kodwa leliqhinga akuniké Imiphumela omkhulu ngaphandle kokubukela phansi impilo umsubathi. Ngakho singasho ukuthi ukungazi wasiza sawo esiningi legend emsebenzini wakhe, ngoba ngubani okwaziyo eyayingase iqedwe ukuqeqeshwa ku inqubo efanele.
Novemba 12, 2012 ngesikhathi 71 ngonyaka th zokuphila ushiye lesi emhlabeni bodybuilder edume Sergio Oliva. Imbangela yokufa - nokwehluleka ukusebenza kwezinso.
Oksana Grishina: umsubathi, enhle intombazane uhlakaniphile
Usuku Z. Kanjani I ufake lolu mod ngoba Arma 2 imidlalo
Pedicure ne rhinestones sikhulise isitayela sakho
Alupka Park: incazelo, ezikhangayo. Itshe lesikhumbuzo landscape art